ကုန်တင်များ၏အနာဂတ်3နှစ်ပေါင်း3months ago #501
ကုန်တင်၏လက်ရှိ lineup ဖြည်းဖြည်းထွက် phased ခံနှင့်အတူ, ဒီငှက်အနာဂတ်မှာဘာ, လှည့်လည်ခဲ့သလဲ B747,757,767 ... A300,310 နဲ့တူလေယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုမရှိတော့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်ဘိုးအင်းနှင့်အဲယားဘတ်စ်နှစ်ဦးစလုံး 787,777-x, A330Neo နှင့် A350 ၏ကုန်တင်ဗားရှင်းအဘို့အသွားလိမ့်မည်ဟုအလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ရဲ့, ဒီတော့ငါမေးချင်ပါတယ်, သင်ယောက်ျားတွေအကြောင်းအဘယ်သို့ထင်ကြဘူး , ကုန်တင်ဘို့ကိုမဆိုအနာဂတ်ရှိသလော
ကုန်တင်များ၏အနာဂတ်3နှစ်ပေါင်း3months ago #502
အဆိုပါ 747 ထုတ်လုပ်မှု (pax နှင့်ကုန်တင်နှစ်ဦးစလုံး) ထဲမှာနေတုန်းပဲအရမ်းဖြစ်တယ်, နှင့် 777 တစ်ကုန်တင်ဗားရှင်းအမှန်ပင်ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့, 129 777Fs ဖေဖော်ဝါရီလအဖြစ်ပေးပို့ပြီးပါပြီ။ အဆိုပါ 767 FedEx အဆိုပါကုန်တင်ဗားရှင်းတစ်ခုလုံး crapload မိန့်နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်
ကုန်တင်များ၏အနာဂတ်3နှစ်ပေါင်း3months ago #503
ဘိုးအင်းကို web site ကိုလှည့်ပတ်တချို့ရှာဖွေပြီးနောက်, ငါထနေတဲ့မျဉ်းကြောင်း ... ကောင်းစွာဘိုးအင်းပြုမိသောအရာကို ... ငါဆိုလို, ငါတကယ်မှားသည်ဟုဆိုရန်ရှိသည်။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင်အဲယားဘတ်စ်သည် ... ကျွန်မထိုသူတို့အဘို့တရားခန့်မှန်း ...
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် Dariussssss.
ကုန်တင်များ၏အနာဂတ်3နှစ်ပေါင်း3months ago #508
yeah, ဘိုးအင်းတော်တော်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ယခုသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပျံသန်း TWO B-29s ရှိသည်။
အရှည်ဆုံးအချိန်က "FIFI" ပဲဖြစ်ပေမယ့် Boeing's Kansas စက်ရုံရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် DOC ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဖန်ပျံသန်းနေပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ ..... ထိုစက်ရုံသည် DOC ၏မွေးရပ်မြေဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် DOC တည်ဆောက်ရန်မူလကကူညီခဲ့သူအချို့သည်မူလဘိုးအင်းဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ DOC ကိုလေထဲပြန်ထည့်ရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်
ကုန်တင်များ၏အနာဂတ်3နှစ်ပေါင်း3months ago #511
Airbus သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်များတွင်အလားအလာကောင်းများကိုမမြင်နိုင်သဖြင့် A350 နှင့် A380 တို့တွင်အလွန်အံ့အားသင့်မိသည်။ ငါ 747 ကမကောင်းဘူး၊ တစ်ခုခုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အရွယ်အစားအပြည့်အစုံပါတဲ့နှစ်ထပ်အပိုကုန်တင်ယာဉ်ဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကွာအဝေး ၈,၅၀၀ nm ထပ်ထည့်ပါ၊ ဒါကြောင့် Freighter version မှာ ၁၀၀၀ တောင်မပြောရသေးဘူး၊ ဒါကတော်တော်လေးလေးနက်တဲ့အကွာအဝေးပဲ။
ကိုယ့်ကြောင့်နားလည်လို့မရပါဘူး ... သူတို့က .... ကုန်တင်ကုန်ချမှတည်ဆဲ PAX လေယာဉ်ပြောင်း, တချို့ PAX-ကုန်တင်အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြည်းကိုခြင်းဖြစ်သည်ဘယ်လောက်ဆိုးရွား ... A340-500 F ကိုစဉ်းစားငါ့ကိုတယ်? ကျွန်မဦး MD-11 သတိရလျှင်, တက pax လေယာဉ်အဖြစ်ဘေးအန္တရာယ်ခဲ့ပေမယ့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ-အပေါ်တစ်ဦးကုန်တင်အဖြစ်ကိုဆိုလိုတာ။
0.229 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်